Linux Mint တွင် AMD gpu pro drivers များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
မင်္ဂလာပါယနေ့ကောင်းသောနေ့ပါတ ပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်းများတပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းကိုသင့်အားသင်ပြောပြရန်ကျွန်ုပ်လာသည် သူတို့ဘာပေးကြတာလဲ ATI ကဒ်များအတွက် ပရိုဆက်ဆာတွေအတွက်သာမက GPU လည်းပါရှိတယ်။
Yo ငါ့မှာ AMD ပရိုဆက်ဆာပါတဲ့ hp မှတ်စုစာအုပ်ရှိတယ် R8 ဂရပ်ဖစ်ပါတဲ့ A5, ဒါကြောင့်ငါ AMD drivers ဗားရှင်း 15.7 install လုပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းငါ 1.17 ကိုသုံးပြီးကတည်းကငါမရှိသည် Xorg ဗားရှင်း 1.19 ရှိရမည်။
ဒါကြောင့်ငါ AMDGPU PRO drivers တွေကိုသုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်ကျွန်တော့် system ထဲကိုထည့်သွင်းဖို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ chipset နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသိရန် ပထမ ဦး ဆုံးဒီယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ ငါတို့မော်ဒယ်ကိုသိရမယ်၊ ဒီအတွက် terminal Ctrl + T ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
ယခု လာမယ့်ခြေလှမ်းလိုက်ဖက်တဲ့စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သင်ဒီမှာလုပ်နိုင်တယ် ဒီ link ထဲမှာ
၎င်းသည်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းသေချာစွာသိခြင်း နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် kernel ဗားရှင်း ၄.၁၃ နှင့်အထက်ရှိကြောင်းကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်ဒီမတိုင်မီဗားရှင်း၌ပေးသော, အသံမရှိသောအမှားတစ်ခုရှိသည် HDMI output ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ။
ကျွန်တော်တို့မှာဘာ kernel version ရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့အောက်ပါ Command ကိုလုပ်ရမည်။
မရရှိလျှင်၊ သင်ပိုမိုသော kernel ကိုသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ဤအဆင့်များနှင့်ပြီးသား အခု AMDGPU PRO driver ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် ငါတို့စနစ်၌တည်၏။
1 AMDGPU PRO driver ကို download လုပ်ပါ
2 Linux Mint တွင် AMDGPU PRO driver ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
3 Blackscreen ဖြေရှင်းနည်းများ
AMDGPU PRO driver ကို download လုပ်ပါ
driver ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်နှင့်လိုက်ဖက်သောမည်သည့်ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိရမည်, ယခင် link ကိုအတွက်ယာဉ်မောင်း 16.40 သို့မဟုတ် 17.40 နှင့်အတူပါလျှင်ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာသူကနှစ်ခုလုံးနဲ့သဟဇာတဖြစ်လို့နောက်ဆုံးပေါ် install လုပ်မယ်၊ link ကိုထားခဲ့ပါ နှစ်ခုလုံးအတွက်
Linux Mint တွင် AMDGPU PRO driver ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ကူးယူပြီးပြီ download လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်ချရမယ်ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးဖိုင်ကို download လုပ်ထားသောဖိုင်တွဲတွင်နေရာချပြီးအောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ကတ္တရာစေး -Jxvf amdgpu-pro-amdgpu-pro-17.40-492261.tar.xz
ဒီမှာ သင် download လုပ်ထားသော driver ၏ version အတွက် command ကိုပြောင်းရမည်။
ယခု ဒီဟာဘယ်မှာလဲ ကျွန်ုပ်တို့ amdgpu-pro-install ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရမည်, ဖိုင်ကို unzipping ပြီးနောက် folder ထဲမှာတည်ရှိသည်။
Ubuntu ကို linuxmint အတွက်လဲပြောင်းလိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးသင်ပိုမိုမြင့်မားသော version ကို download လုပ်ပါက code မှအောက်ပါတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
အခုဆိုရင်သင် drivers တွေကို install လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပြီ။
မှတ်စု: သူတို့ sudo မသုံးသင့်ပါတယ်လိုအပ်သည့်အခါအထူးအခွင့်အရေးများကိုချီးမြှင့်ရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသည်။
တဖန်ငါတို့ပြန်လည်စတင်အချို့ကိစ္စများတွင် reboot နှစ်ခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သူတို့ကကိစ္စပေါ် မူတည်၍ အောက်ပါအငြင်းပွားမှုများကိုသုံးနိုင်သည်။
ငါ၏အမှု၌ငါ -px သိမ်းပိုက် အကယ်၍ အခြားတစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်ုပ် install လုပ်မိလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်အမှားဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အကယ်လို့မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုတခုကိုမပြုလုပ်ခဲ့လျှင်၊ သင်သည်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကိုရနိုင်သည်၊ သို့သော်ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိပါက၎င်းတွင်ဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။
ငါသည်ငါ့အမှု၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငါ -px argument နှင့်အတူ install လုပ်ခဲ့ရတယ်, ဒါကြောင့် s ကိုအကယ်၍ တပ်ဆင်မှုအလုပ်မလုပ်ပါက၎င်းတို့သည်အခြားအငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ရမည်, uninstall ရန်, ရိုက်ပါ။
နောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက်ကတော့ grub ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်, နည်းလမ်းသည်အောက်ပါလိုင်းကိုတည်းဖြတ်သည်၊ ဤအတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောတည်းဖြတ်သူကိုအသုံးပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင် nano ကိုသုံးသည်။
သူတို့က amdgpu.vm_fragment_size =9ကိုအောက်ပါလိုင်းတွင်ထည့်သည်။
သူတို့ကအပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် grub update ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Linux Mint ဖိုရမ်များရှိလူများအားကျွန်ုပ်အားအလွန်ကြင်နာစွာလမ်းညွှန်ပေးသောကြောင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နည်းလမ်းကိုမျှဝေသူဝန်ထမ်းများ။ လာမယ့်အချိန်တိုင်အောင်မပို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Linux Mint တွင် AMD gpu pro drivers များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
install လုပ်သည့်အခါသင်ပြော? ./amdgpu-install -y –px?
MagpieOS - Arch Linux ကိုအခြေခံသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း